Tora paki yemakosi ekutora mifananidzo pamutengo we1 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Bundle Co. Spain auya munyika yedu nechisimba. Kazhinji isu takataura zvakawanda muiyi blog nezve vhidhiyo mutambo masumbu, asi sezvamunonyatso ziva, kune akawanda masumbu ezvimwe zvigadzirwa zvakawanda. Kana usati uchiziva izwi rekuti bundle, uchiti inzira yekutengesa iyo inosanganisira kurongedza rongedza kana boka rezvigadzirwa zvine muto wakanyanya uchienzaniswa nemutengo uyo izvo zvigadzirwa zvaizove zvakasiyana, saka inzira yakanaka kuwana zvimwe nemari yakakosha yekuchengetedza.
Zvakanaka, Iyo Bundle Co haisi yevhidhiyo mutambo bundle, asi inoitirwa epamhepo ekudzidzisa makosi. Izvo zviri kuitwa nekambani iyi kugadzira mapakeji ekosi uye nekuvatengesa nemutengo unosetsa wevhiki. Uye iwo makosi evanyori vanozivikanwa uye ayo ega kazhinji anodhura ari pakati pe $ 100 ne $ 500, saka iwo haasi epasi-emhando makosi sezvaanopihwa mune mamwe emitengo yakaderera.
Nemapaketi kana masumbu ayo avanogadzira, vanowana kukanganisa hapana chimwezve uye hapana chakaderera pane a 97.5%, chinova chibvumirano chaicho. Nekudaro, chikuva ichi chidiki kuno kuSpain uye makosi aanopa ari muChirungu nekuti anobva kuvanyori veAmerica. Asi kana mutauro usiri chipingamupinyi kwauri, chokwadi ndechekuti inokurudzirwa zvakanyanya kune mhando uye mutengo wemakosi. Uye zvakare, iwo mavhidhiyo makosi haana kuoma kunzwisisa kana yako nhanho isiri yakanyanya kukwirira, nekuti ivo vanotaura zvishoma nezvishoma, vasina slang uye vanowanzo nzwisiswa ... Uye izvo zvirimo muPDF, nekuti iwe unogona kugara uchidudzira izvo.
Kuti upe muenzaniso, iyo bundle yazvino yavakavhura ine dingindira rinodzokororwa: mufananidzo. Saka yakafadza vese vanofarira kutora mafoto. Yakapihwa kwevhiki sekureva kwedu, uye kutanga zuva rekupedzisira 4 uye ichave kusvika mangwana Chipiri 12. Kana iwe uchida ruzivo rwehupfumi, mutengo wemakosi makumi matatu akaiswa mupakeji wakasvika ku € 30 uye wakapihwa € 1200, iyo inokupa iwe zano rezvaunogona kusevha. Asi usazvidya moyo nezve izvi, pachave nemazhinji mabhureki emimwe misoro yekugutsa zvido zvevazhinji vashandisi.
Ndekupi kwandinogona kusaina kana kuwana ruzivo?
Yepamutemo Webhu - TheBundleCo
In the peji yepamutemo Iwe unowana rumwe ruzivo nezve vanyori, vanobatsirana, kubatana, kana kubata kwavari zvakananga. Iyo yewebhu interface inoshandurwa mumitauro miviri (Spanish neChirungu), saka hauzove nedambudziko. Zvakare, kana iwe uchifarira kutora chikamu uye kushambadza yako blog kana yako projekiti, unogona kunge uri mukana wakanaka kuzviisa pachezvako kuitira kuti vako vamangwana vatengi kana vashandisi vazive nezvako nerudzi urwu rwepuratifomu. Ndokunge, zvinogona kwete kungokufarira iwe kana iwe uchitsvaga kurovedzwa, asi zvakare kana iwe uri nyanzvi yacho.
Sezvandareva, hapana chete bhaisikopo rekutora kana iwe usiri kufarira nezve chidzidzo ichocho. Zvakare zvevamwe vakawanda zvine musoro akasiyana uye zvimwe zvichauya. Kubva zvidzidzo yevekudya, DIY (Zviitire Iwe pachako) zvemaoko, runako, kugwinya, nezvimwe. Vhiki yega yega ivo vanozovandudzwa, saka ndinokukurudzira kuti unyore uye ugamuchire dzese nhau neemail uye usarasikirwe nezvakanaka zvinopihwa. Iwe unongofanirwa kuisa zita rako neemail pane peji rekutanga:
Izvi ndozvazvichaitika kwauri manotsi neemail kuzivisa nhau, nekuti nekuda kwechimiro chenguva pfupi yezvinopihwa (vhiki imwe chete) zviri nyore kuti kana tisingateerere pawebhu kana isu tichikanganwa kutarisa, kupihwa kwakanyanya kwemusoro wechinhu chinotifadza kuchatipfuudza by. Kune rimwe divi, ndiani asingatarise tsamba zuva nezuva?
Ndinovimba iwe wakafarira chirongwa ichi chechokwadi mabundles, kuti hazvisi zvese nyika yekutamba ... ndinonzwisisa kuti vazhinji vaverengi veLxA vanozonyanya kufarira nezvevamwe mamwe tekinoroji madingindira, asi iva nemoyo murefu, ini ndirikukuudza kare kuti mapakeji acho achavandudzwa ...;)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Tora paki yemakosi ekutora mifananidzo pamutengo we1
Yakanakisa yakavhurwa sosi yemavhidhiyo mitambo